जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया शुरु, इक्रा नेपालमा रेटिङ सम्पन्न
साउन ३, काठमाडौं । जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि इक्रा नेपालमा रेटिङ गराएको छ ।
कम्पनीले निष्कासन गर्ने आइपीओलाई इक्रा नेपालले इक्रा एनपीआइआर बिबि रेटिङ प्रदान गरेको छ । यस्तो रेटिङले जोखिम मध्यम रहेको देखाउँछ । कम्पनीले ५ लाख २२ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि रेटिङ गराएको हो ।
उक्त आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि कम्पनीले विक्री प्रबन्धक नियुक्त गरिसकेको छ । विक्री प्रबन्धकमा कम्पनीले प्रभु क्यापिटललाई नियुक्त गरेको हो । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएर स्वीकृति पाएपछि मात्र आईपीओ निष्कासन गर्नेछ ।
कम्पनीको प्रधान कार्यलय पोखराको सिमलचौरमा रहेको छ । हालसम्ममा २० जिल्लामा लघुवित्त व्यवसाय प्रदान गर्दै आएको छ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १० करोड ७८ लाख रहेको छ । आईपीओ निष्कासन पछि उक्त पूँजी रू. १६ करोड पुग्नेछ ।